မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: 02/01/2008 - 03/01/2008
ဒီနှစ်မွေးနေ့မှာ ကျမတခါမှ မရဘူးတဲ့ ထူးခြားတဲ့ လက်ဆောင်တခုကို မမျှော်လင့်ပဲ ခင်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်ဆီက မမျှော်လင့်ပဲ ရခဲ့တယ်..
တကယ်တော့ ဒီနှစ်မွေးနေ့ မှာ ကျမ ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ ပျောက်ဆုံးခဲ့ရတယ်.. ယုံကြည်မှုတွေ အရည်ပျော်ခဲ့တယ်… ခွန်အားတွေ အငွေ့ပြန်ခဲ့တယ်… အိမ်မက်တွေ ပျက်စီးခဲ့ရတယ်.. တသက်လုံး ယုံကြည်အားကိုးချင်ခဲ့တဲ့ သူတယောက်လက်အောက်မှာ ကျမရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေဖျက်စီးခံခဲ့ရတယ်…
အသဲကွဲလို့ မျက်ရည်တရွှဲရွှဲဖြစ်နေ ရမယ့်အရွယ်လဲ မဟုတ်တော့ပါဘူး.. ပြီးသွားရင် ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုလဲ နားလည်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ခံစားရတာတော့ ရင်နဲ့အမျှပါ..
ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အတတ်နိုင်ဆုံးပျော်အောင်နေတယ်.. ကျမကို ဂရုစိုက်တဲ့… ကျမကို ချစ်တဲ့ မိသားစုကို ကျမကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ရှာလာတဲ့အပူမပေးချင်ဘူး..
အဲဒီအချိန်မှာပဲ ကျမ ဘလော့ရေးရင်း မထင်မှတ်ပဲ ခင်စရာကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်ရလာတယ်..
သူက ကျမ ဘလော့ရေးချင်စိတ်မရှိတာကို ပြန်ရေးချင်အောင်တိုက်တွန်းပေးခဲ့တယ်..
သူက ကျမ စကားပြောဖော်လိုနေတဲ့ အချိန် အဖော်လုပ်ပေးခဲ့တယ်..
သူက new year ညမှာ ကျမကို အားပေးခဲ့တယ်…
သူက ကျမ အထီးကျန်နေချိန်မှာ ကျမ တယောက်ထဲ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို အလင်းပြခဲ့တယ်..
ခုလဲ သူက ကျမ အတွက် အရမ်းကို အမှတ်တရဖြစ်စေမဲ့ မွေးနေ့လက်ဆောင် ပေးပြန်ပြီ…
သူက ကျမ နဲ့ ရွယ်တူ ...
သူက ကျမ နဲ့ ပြိုင်ဘက်အထက်ကျောင်းက….
သူက တော့ အားလုံးသိတဲ့ ဘလော့ဂါ Blackdream ပေါ့…
သူပေးတဲ့ လက်ဆောင် လေးကို သူ့ရဲ့ ခွင့်ပြုတောင်းဆိုမှုအရ ကျမရဲ့ဘလော့မှာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်….
ဒီပိုစ့်လေးဟာ ကျမ ဘ၀အတွက် ဘာအခက်ခဲတွေရှိရှိ ရှေ့ဆက်ဖို့အတွက် အားဆေးတစ်ခွက်ပါပဲ…
တကယ်ကို တန်ဖိုးကြီးပြီး အမှတ်တရ နဲ့ တဘ၀လုံးအတွက် ဖူလုံစေတဲ့ လက်ဆောင်ကောင်းလေးပါ….
သူငယ်ချင်းရေ … နင်နဲ့ခင်ရတာ ငါဝမ်းသာတယ်ဟာ..
Posted by mabaydar at 9:42 AM3comments :
ဘလော့ပေါ်က မဗေဒါ့ မွေးနေ့.. အားမနာနဲ့နော်..
ဒီနေ့ မဗေဒါ မွေးနေ့လေ.. လာလည်တဲ့ blogger သူငယ်ချင်းတွေကို ကျွေးဖို့ ချက်နေတယ်.. ခါတိုင်းဆိုရင်တော့ ခင်တဲ့အပြင်သူငယ်ချင်းတွေကို ဖိတ်ပြီး အိမ်မှာ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ ကျွေးလေ့ရှိတယ်.. မဗေဒါက အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲကြိုက်လို့လေ.. ဗေဒါ အစ်မကလဲ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ specialist လေ… သူကလိုက်လုပ်ပေးတာလဲပါတာပေါ့နော်.. ပြီးတော့ အိမ်ကမိသားစုအားလုံးကလဲ အိမ်မှာချက်ပြီး အလှူလုပ်ရတာ ကြိုက်တယ်.. အထူးသဖြင့်.. အမိမြေနဲ့ဝေးပြီး မြန်မာအစားအစာနဲ့ဝေးနေရတဲ့ မဗေဒါ သူငယ်ချင်းတွေကို မဗေဒါ
မေမေကသနားလို့ဆိုပြီး သူ စင်ကာပူရောက်ရင်ချက်ချက်ကျွေးနေကျပဲ.. ဗေဒါမွေးနေ့ ရောက်တိုင်း ဗေဒါ ကလုပ်ချင်တယ်ပြောတိုင်း.. ပွစိပွစိပြောတတ်ပေမဲ့ အမြဲ ကိုယ်ရောစိတ်ရော အပင်ပန်းခံပြီးလုပ်ပေးတတ်တဲ့ ဗေဒါ အစ်မ အကြီးဆုံးကိုရော.. ဧည့်သည်တွေလာတိုင်း သီးခံပြီး ဧည့်ခံပေးတတ်တဲ့ အစ်မ အလတ်ရော.. အမြဲမီးဖိုချောင်ကမထွက်ရပဲ.. ပြင်ဆင်ပေးနေရတဲ့… ဖေဖေနဲ့မေမေရော.. အားလုံးကို ဖွင့်မပြောပေမဲ့.. စိတ်ထဲကကျေးဇူးသိပ်တင်တယ်.. တကယ်တော့ ဗေဒါမွေးနေ့မှာ.. ချစ်သူရှိနေဖို့မလိုပါဘူး… ဗေဒါကို ချစ်သူထက်ပိုချစ်တဲ့ ဗေဒါ မိသားစုရှိတယ်… သူတို့ ပဲ ဆူဆူဆဲဆဲ ဆိုပေမဲ့ ဗေဒါကို စိတ်ချမ်းသာအောင် အမြဲထားတတ်တယ်.. သူတို့စိတ်ထဲဘာရှိလဲ ဗေဒါ သိတာပဲလေ… ဗေဒါကိုယ်တိုင်လဲ.. ကျေးဇူးတင်ပေမဲ့ ဘယ်တော့မှ ဖွင့်ပြောတာမှမဟုတ်တာ..
ဗေဒါ ဘလော့ကို လာလည်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်တော့.. အ၀စားအစီစဉ်ရှိတယ်.. စိတ်ရှည်ရှည်သာ scroll down လုပ်သွားပေတော့…
ပြီးတော့ အသုတ်ဆုံ… ဘာအသုတ်စားချင်လဲ.. ချက်ချင်းသုတ်ပေးမယ်..
မနက်စာ manu ကတော့ ဒီမှာအဆုံးသတ်လိုက်မယ်…
နေ့လည်စာရော စားနိုင်သေးရဲ့လား? ဟဲ ဟဲ..
မြန်မာထမင်းဟင်း ကြိုက်တတ်ရင် ဒီမှာရှိတယ်..
ဗေဒါ့ အကြိုက်ချဉ်ပေါင်ကြော်လဲ ရှိတယ်..
စားမယ်ဆို ဒီကိုကြွပါ.. ထမင်းဝိုင်း ပြင်ပြီးပါပြီ.. လုံးဝအားမနာနဲ့နော်….
မြန်မာပြည်မှာပဲ ရှိတဲ့တရုတ်စာ ကြိုက်တဲ့ သူတွေအတွက်လဲ စီစဉ်ထားသေးတယ်..
Chinese Manu ကဟောဒီမှာ..
စားပြီးရင်တော့ ဒုတ်လေးတွေကိုင်ထားနော်.. မဗေဒါက ပိုက်ဆံရှင်းပေးမလို့ပါ..
ဟောဒါကတော့.. ဗေဒါ့ မိသားစုရဲ့ homemade food… တရုတ်စာစားဖို့ ဒီဖက်ကိုကြွပါ…
၀ိုင်းမအားလို့ မစားရသေးတဲ့ ဧည့်သည်တွေရယ်.. စားပြီးတဲ့ဧည့်သည်တွေရယ် စကားစမြည်ပြောရင်း စားရအောင် .. မြန်မာတိုင်းကြိုက်တဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ လက်ဖက်သုတ်…
ဒီမှာ အချိုပွဲတွေလဲ ကျန်သေးတယ်.. ဘာစားချင်လဲပြော..
အားလုံးဗိုက်တင်းတဲ့ အထိစားကြနော်.. လုံးဝအားမနာနဲ့.. ဗေဒါမွေးနေ့ကို ခုလိုကြွရောက်အားပေးကြတာ ကျေးဇူး…
Posted by mabaydar at 4:13 PM 23 comments :